Okunye ukungaqondi mayelana nezindaba ze-MBR Process-Industry-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd.
Ukungaqondi okuthile mayelana nenqubo ye-MBR
Isikhathi: 2020-07-06 Hits: 112
Ngabe uyabuqonda ngempela ubuchwepheshe be-MBR? Ngabe uyayazi indlela yokuyisebenzisa?
Eminyakeni yamuva nje, inqubo ye-MBR isetshenziswe kabanzi ngabantu. Inqubo ye-MBR ingasetshenziswa ezinhlelweni eziningi njengokuphinda usebenzise amanzi abuyiselwe, ukuphuculwa kwamazinga ezemvelo, kanye nokusabalalisa ukwelashwa kwamanzi amdaka. Njengoba sonke sazi, isizathu esenza inqubo ye-MBR isebenzise kabanzi kangaka kungenxa yezinzuzo zayo ezivelele njengokulayisha okuphezulu, isikhathi eside sodaka, ukusebenza kahle okuphezulu kwe-shutoff, kanye ne-footprint encane.
Le ndatshana izokwazisa ngokungaqondi okuvame ukwenziwa ekusebenzeni kwenqubo ye-MBR ekwelashweni kwendle.
Ukungaqondi kahle 1: Ukuphakama komklamo we-flux we-membrane we-MBR, okungcono.
Ukuhunyushwa okulungile: Ukugeleza kolwelwesi kunqunywa ngento kanye nokwakheka kolwelwesi. Kwiyunithi ethile yokulungiswa kwe-membrane, kunomkhawulo ophezulu we-porility yayo ne-flux. Ukuhlunga empeleni kuyinqubo yomzimba. Izinto eziseMembrane kufanele zinikele ngokudlula ngenkathi zinciphisa usayizi weporesi. Ngaphezu kwalokho ukusetshenziswa kwe-membrane materials nakho kudinga ukubheka amandla ayo, ukusebenza isikhathi eside nezinye izici. Zonke lezi zinto ziholela ku-flux kufanele kube yimali elungisiwe.
Ngakho-ke, isicelo kanye nokuklanywa kwezimpawu zolwelwesi ekwelashweni kwamanzi amdaka, kungcono ukubhekisa kumngcele onconywe abakhiqizi be-membrane.
Esihlokweni esilandelayo, sizoqhubeka nokwazisa okunye ukungaqondi kahle kwenqubo ye-MBR.
Okwedlule: Okunye ukungaqondi kahle ngenqubo ye-MBR ②
Okulandelayo: Mayelana ne-COD, i-BOD